Fatịlaịza Organic Fatịlaịza Na-ebugharị eldị Wheel eldị Composting Turner Machine na-eweta ya na orylọ Ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ Wheel Type Composting Turner Machine?
Wheel Type Composting Turner Machine bụ ihe dị mkpa gbaa ụka akụrụngwa na nnukwu ọnụ ọgụgụ organic fatịlaịza Ndinam osisi. Onye na-atụgharị compost na wheeled nwere ike ibugharị na-aga n'ihu, azụ na azụ, nke ọ bụ otu onye na-arụ. Wheeled composting wiil na-arụ ọrụ n'elu teepu compost stacked n'ọdịnihu; Rotary kn arụnyere na ike n'usoro drums n'okpuru traktọ okike bụ ngwaọrụ maka inggwakọta, atọpụ ma ọ bụ na-akpụ akpụ stacking stacks.
Ngwa nke Wheel Type Composting Turner Machine
Wheel Type Composting Turner Machine a na-ejikarị ya eme ihe na gbaa ụka na ọrụ mwepụ mmiri dị ka osisi fatịlaịza organic, osisi fatịlaịza, sludge na ụlọ mkpofu, ubi ugbo na osisi ero.
1. Kwesịrị ekwesị maka ịgba ụka aerobic, enwere ike iji ya na ọnụ ụlọ gbaa ụka nke anyanwụ, tankị gbaa ụka na ndị na-agbanwe agbanwe.
2. Ngwaahịa ndị e nwetara site na gbaa ụka nke aerobic nwere ike iji mee ihe maka imeziwanye ala, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mkpuchi ala, wdg.
1. Wheel Type Composting Turner Machine nwere ike ịga n’ihu, n’azụ wee tụgharịa kpamkpam ma ọ bụ otu onye na-emegharị ihe ndị a niile.
2. Ihe ndi bio-organic kwesiri iburu uzo buru ala ma obu uloru na udi warara.
3. Compost Turner na-arụ ọrụ site na bestriding n'elu warara compost kpokọtara tupu oge eruo; akara na-agbanwe agbanwe nke etinyere n’igwe dị ike nke na-agbagharị agbagharị n'okpuru traktọ bụ ezigbo ngwaọrụ iji jikọta, tụọ ma ọ bụ bugharịa compost.
4. Mgbe ọ tụgharịrị, a na-ewepụta ihe mgbochi compost ọhụrụ wee chere ka ịga n'ihu gbaa ụka.
5. Enwere temometa compost iji tụọ ọnọdụ okpomọkụ compost ka ọ bụrụ oge nke abụọ ịtụgharị.
Uru nke Wheel Type Composting Turner Machine
1. Omimi ntụgharị miri emi: omimi nwere ike ịbụ 1.5-3m;
2. Nnukwu oge ntụgharị: nnukwu obosara nwere ike ịbụ 30m;
3. Ike oriri dị ala: ịnakwere usoro nnyefe ike dị iche iche pụrụ iche, na ike oriri nke otu olu na-arụ ọrụ bụ 70% dị ala karịa nke usoro ntụgharị ọdịnala;
4. Na-atụgharị na-enweghị onwu nwụrụ anwụ: ntụgharị ntụgharị dị na symmetry, yana n'okpuru mwepụ nke gọvanọ na-agbanwe trolley, enweghị ụzọ nwụrụ anwụ;
5. Akwa dị elu nke akpaaka: ọ kwadebere n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ eletriki na-akpaghị aka, mgbe onye ntụgharị na-arụ ọrụ na-enweghị mkpa maka onye ọrụ.
Wheel Type Composting Turner Machine Model nhọrọ
Main ike (kw)
Mobile moto ọkọnọ (kw)
Ike na-enweghị atụ (kw)
Tụgharịa obosara (m)
Tụgharịa omimi (m)
Nke gara aga: Kwụrụ tankị
Osote: Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner